Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Iilọ nkwari akụ Hawaii: Nọmba 2021 dị ala ma e jiri ya tụnyere ọnwa atọ mbụ nke 2020 » Page 2
Hotelslọ nkwari akụ ndị dị na Maui na-akọ ọrụ ka mma ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga ma duzie ógbè ahụ na March RevPAR nke $ 228 (+ 18.7%), na ADR na-arịgo $ 466 (+ 10.9%) ma biri na 49.0 pasent (+3.2 pasent isi). Onyinye March nke Maui bụ 392,800 ụlọ abalị (-0.3%). Mpaghara ntụrụndụ nke Maui nke Wailea nwere RevPAR nke $ 362 (+ 26.0%), na ADR na $ 802 (+ 27.2%) na obibi nke 45.2 pasent (-0.5 pasent isi). Mpaghara Lahaina / Kaanapali / Kapalua nwere RevPAR nke $ 180 (+ 7.1%), ADR na $ 379 (+ 3.2%) na obibi nke 47.4 pasent (+1.7 pasent isi).
Elslọ nkwari akụ ndị dị n'àgwàetiti Hawaii kọkwara na ọganihu RevPAR na $ 157 (+ 26.7%), na ADR na $ 317 (+ 17.6%) na obibi nke 49.6 pasent (+ pasent pasent 3.5). Agwaetiti Hawaii nke ọnwa March bụ 202,600 ụlọ abalị (-2.2%). Hotelslọ nkwari akụ Kohala Coast nwetara RevPAR nke $ 262 (+ 46.2%), na ADR na $ 476 (+ 16.0%) na obibi nke 55.1 pasent (+ pasent 11.4).
Oahu hotels na-aga n'ihu na RevPAR nke $ 74 (-20.1%) na Machị, ADR na $ 184 (-16.1%) na obibi nke 40.4 pasent (-2.0 pasent ihe). Onwa March nke Oahu bu 870,100 abali abali (-8.3%). Hotelslọ nkwari akụ Waikiki nwetara $ 68 (-23.2%) na RevPAR na ADR na $ 173 (-19.5%) na obibi nke 39.4 pasent (-1.9 pasent isi).
Ulọ nkwari akụ Kauai nwetara RevPAR nke $ 62 (-53.3%), na ADR na $ 200 (-31.7%) na obibi nke 30.9 pasent (-14.3 pasent isi). Kauai nyere onwa Meri bu 100,600 abali ulo (-22.9%).
Nkezi Mbụ Nkeji 2021
N'ime ọnwa atọ mbụ nke 2021, ọrịa mgbasa COVID-19 gara n'ihu na-enwe arụmọrụ ụlọ nkwari akụ Hawaii na steeti niile. Hotelslọ nkwari akụ Hawaii nwetara $ 87 na RevPAR (-59.5%), nke bụ ihe na-erughị ọkara nke $ 215 RevPAR kọrọ maka otu oge ahụ na 2020. ADR gbadara na $ 269 (-12.0%) na ndị bi na ya jụrụ 32.4 pasent (-38.0 pasent isi) .